Chivabvu 11, 2018 arun
Bank of Canada kushandisa blockchain kuti pakarepo kugadzirisa kuchengetedzeka
Zvichangoburwa “Project Jasper” miedzo blockchain kwakaratidza kuti vakaparadzira ledgers dzinobudirira panguva automating kuchengetedzeka misha mu-zvechokwadi nguva, maererano Bank of Canada uye vamwe vaviri “Integrated kuchengetedzeka uye mubhadharo ugari” purojekiti.
Gerry Gaetz, Purezidhendi uye CEO vachibhadhara Canada, anonzi akati:
“Izvi zvinoratidza kuti zvinobvira kununura kubhadhara nenzira haana zvaitwa asati – nokuda zvakananga swapping mari kubva vatengi kuti Vatengesi, zvichiguma kamwe yawo.”
Korean Exchange Upbit akavhiringidza ne Vachuchisi
Vachuchisi mu South Korea yakashumwa akavhiringidza chikuru cryptocurrency mukutsinhana munyika, UPbit. Vaongorori kubva Vachuchisi’ Hofisi Seoul vakanzvera musoro yebazi Exchange musi May 10th.
UPbit ari vaifungidzirwa kubiridzira yekuti kutengesa cryptocurrency kuti vatengi kuti yorega bata, maererano nomushumo.
The Vachuchisi’ hofisi waiti: “Hatina yakasimbiswa disks zvakaoma uye chizvidavirire mabhuku kuburikidza nokubvuta. Analysis vanotarisirwa kutora mazuva.”
Huawei inosanganisira Bitcoin chikwama Anwendung mu Anwendung kwayo chitoro
Vanoshandisa Huawei nhare vachakwanisa kukopa Bitcoin wallets pamusoro zvavanoshandisa kekutanga kutanga Chishanu.
Huawei, munyika wechitatu zvikuru handset muiti, anosunungura BTC.com raMwari Bitcoin chikwama racho AppGallery, MAERERANO Alejandro the Torre, BTC.com kuti mutevedzeri womutungamiriri dzebhizimisi kwacho.
Iye akati AppGallery achapiwa kwerubwinyo rwakagara rwuripo yakaiswa pa zvose zvitsva Huawei dzeserura.
Kutama vangangoshandira zvikuru zvazvinoita mune Chinese pamusika, apo Huawei ndiko kuri runharembozha mutengesi. The Chinese hurumende kutigumbura Android kuti Google Play Store uye zvimwe zvikamu Apple kuti iTunes, vakaomerwa kuwana Apps akafanana BTC.com raMwari. Nepo China ravadzivirira pasi cryptocurrency zvokutengeserana platforms, vanhu vanogona vane rakapotsa dzeEurope.
"Zvinoita mukana wakanaka Vimba Chinese musika,"The Torre akati parunhare bvunzurudzo. "Kushandiswa cashless kubhadhara vane Apps riri guru zvikuru uye tsika rwezvemabhengi hurongwa chinoshaikwa, saka pane chakanaka kushandisa nyaya kuti crypto kubhadhara kukura ikoko. "
Blockchain News 19 Ndira 2018
Previous Post:Trading Bots nokuti Cryptotrading